Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoonadii Gobolka Axmaarada oo Wali Halkoodii Kasii Socda.
Kacdoonadii Gobolka Axmaarada oo Wali Halkoodii Kasii Socda.
Waxaa wali halkoodii kasii socda mudaaharaadkii balaadhnaa ee lagaga soo horjeeday Gumaysiga Itoobiya ee Gobolka Axmaarada.
Mudaaharaadada ayaa waxay si wayn uga socdaan Magaalooyinka Gonder, Bahardar iyo Tuulooyinka ku xeeran. Mudaaharaadadan ayaa waxay shacabka kacdoonka wadaan u adeegsadaan habab kala duwan ayagoo hada soo rogay in aan wax meherad ah la furin sidoo kale dadku uunsan soo bixin isu socodka magaaladana ay joojiyaan.
Xukuumada Woyaanaha ayaa waxay amar xoog ah ku soo rogtay cidii furi wayda meheradaha in hantidiisa laga la wareegi doono sidoo kalena waxaa la arkayay ciidanka wayaanaha oo waraaqo ku dhajinaya guryaha aan la furin.
Isku soo wada duuboo xaalada Gobolka Axmaarada ayaa waxay kasii daraysaa marba marka kasii danbaysa waxaana xukuumada Woyaanaha ay garan la’dahay sidii ay u maarayn lahayd Mudaaharaadadan lagaga soo hor jeedo xukunkooda macan gaga ah.